အရပ်ရပ်သို့ သွားလာလှည့်လည်သော အမျိုးအနွယ်| Real Conversion
အရပ်ရပ်သို့သွားလာ လှည့်လည်သော အမျိုးအနွယ်
၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၅)ရက်နေ့၊ လောစ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊
“သင်ဒံယေလမူကား၊ အမှုကုန်ရသည်ကာလတိုင်အောင်၊ ဤစကားတော်တို့ကို ပိတ်၍စာစောင်ကိုတံဆိပ်ခတ်ထားလော့။အများသောသူတို့သည်ထို စာကိုကြည့်ရှုသောအားဖြင့် ပညာတိုးပွာလိမ့်မည်ဟုပြောဆို၏။ (ဒံယေလအနာ ဂတ္တိကျမ်း၁၂း၄)။
ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌ ဤတရားဒေသနာတော်ကို အကြိမ်များစွာဟောကြားခဲ့ပြီဖြစ် သည်။ “အရပ်ရပ်သို့သွားလာလှည့်လည်သော “အမျိုးအနွယ်” ဟူသောဒေသနာခေါင်းစဉ်သည် ကျွန်ုပ် ဟောကြားသမျှထဲကအရေးကြီးသော ဒေသနာတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်ဟုထင်မိပါသည်။ထိုအတွက် ဒီကနေ့ညအရောက်စီတိုင်းကို ဂရုတစိုက်နားထောင်စေလိုပါသည်။
“သင်ဒံယေလမူကား၊ အမှုကုန်ရသည်တိုင်အောင်၊ ဤစကားတော် တို့ကိုပိတ်၍ စာစောင်ကိုတံဆိပ်ခပ်ထားလော့။ (ဒံယေလ ၁၂း၄)။
ဤကျမ်းပိုဒ်၌ဖော်ပြသော အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကို “အမှုကုန်ရသည့်ကာလတိုင်အောင်” နားလည်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ ၎င်းသည်အမှုကုန်သည့်ကာလတိုင်အောင် “တံဆိပ်ခပ်၍ပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်ထားရန်မိန့်ဆိုသည့်အတွက်ဖြစ်၏။အနာဂတ်၌ဖြစ်ပျက်လာမည့် ကြိုတင်ဟောကြားချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဒံယေလကိုယ်တိုင် အကုန်အစင်နားမလည် သဘောမပေါက်သည်ကို တွေ့ရသည်။
“ထိုစကားကိုငါကြား၍နားမလည်သောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်၊ ဤအမူအရာတို့သည် အဘယ်သို့ကုန်စင်ပါမည်နည်းဟု မေးလျှောက်လျှင်ထိုသူကဒံယေလ၊သင်သွားလော့။ထိုစကားသည် အမှုကုန်ရသည့် ကာလတိုင်အောင်ပိတ်၍ တံဆိပ်ခတ်ထား လျှက်ရှိ၏ (ဒံယေလ၁၂း၈-၉)။
၂၀ရာစုရောက်မှပဲပရောဖက်တို့၏ ကြိုတင်ဟောကြားချက် ကျမ်းစကားများစတင်၍ ဖြစ် ပျက်ပြည့်စုံလာပါတော့သည်။ ဒေါက်တာဒဗလျူ.အေခရစ္စဝေလ်က၊ ဒံယေလ၁၂း၄နှင့် ပတ်သက် သော “လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသော အသိပညာဗဟုသုတများက ကမ္ဘာကြီး၏ အဆုံးနေ့ရက် အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းများကို ကြိုတင်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။” (Criswell Study Bible ဒံယေလ ၁၂း၄ မှတ်စုအရ)။
“သင်ဒံယေလမူကား၊ အမှုကုန်ရသည်ကာလတိုင်အောင်၊ ဤစကား တော်တို့ကိုပိတ်၍ စာစောင်ကိုတံဆိပ်ခတ်ထားလော့။အများသောသူတို့ သည်ထိုစာကိုကြည့်ရှု့သောအားဖြင့် ပညာ တိုးပွားလိမ့်မည်ဟု ပြောဆို၏ (ဒံယေလ အနာဂတ္တိကျမ်း ၁၂း၄)။
လူသားတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲက ကြိုတင်ဟောကြားချက်များကို စိတ်ဝင် စားလျှက်ရှိကြ၏။ အကြောင်းမှာ ကြိုတင်ဟောကြားချက်များသည် အစ္စရေးနိုင်ငံ၌ဖြစ်ပျက်ပြည့်စုံ လာပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး၌လည်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းပြဿနာများ ဖြစ်ပျက်လာမည်ကိုသမ္မာကျမ်းစာ၌ ကြိုတင်ဟောကြားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဝန်းကျင်ဗေဒဆိုင်ရာပြဿနာ များကမ္ဘာ့လူဦးရေ ပြည့်သိပ်တိုးပွားလာခြင်းနှင့် အစွန်းရောက် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့များ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကမြောက်များစွာသော လူသားတို့၌ ဖြစ်ပျက်လာခြင်းသည်ကျမ်းစာလာကြိုတင်ဟောကြား ချက်များကို အဖြေပေးလျှက်ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။နေ့စဉ်သတင်းစာ၌ကျွန်တော်ဖတ်ကြားသော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပျက်လာမည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာ၌ပြောထားသလား၊ဟုလူအများတို့ကမကြာခဏ မေးကြသည်။အကယ်၍ သမ္မာကျမ်းစာကိုအယုံအကြည်မရှိဘူးဆိုလျှင်အကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာပေါ်၌ ဖြစ်ပျက်နေသော အကြောင်းအရာများက ကျွန်ုပ်အားထိတ်လန့်ခြင်းနှင့် စိတ်ဓါတ်ကျအားငယ်စေမည့်ဟု ဝန်ခံ ပါသည်။ အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းများ ဖြစ်လာမည်ကိုသမ္မာကျမ်းစာ၌ ကြိုတင်ဟောကြားခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိထားဖို့လိုအပ်ပါသည်။ နုတ်ကပတ်တော် သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့မိန့်တော်မူသနည်း၊
၁။	ပထမ၊ဒံယေလ၁၂း၄နှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေသော”နောက်ဆုံးသော ကာလ”၌ ဖြစ်ပျက်လာမည့် လက္ခဏာသက်သေများဖော်ပြခဲ့သည်။
“သင်ဒံယေလမူကား၊အမှုကုန်ရသည့်တိုင်အောင်၊ ဤစကားတော် တို့ကိုပိတ်၍ စာစောင်ကိုတံဆိပ်ခတ်ထားလော့။(ဒံယေလ၁၂း၄)။
“နောက်ဆုံးသောကာလ”၌ ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်ရကြသည်ဟုအကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။နိမိတ်လက္ခ ဏာတစ်ခုပြီးတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့ သိကြသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ အသက်ရှင်နေသောကမ္ဘာကြီး၏”နောက်ဆုံး သောကာလ”၌ ကျွန်ုfပ်တို့အသက်ရှင်ရကြသည် ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ နိမိတ်လက္ခဏာတိုင်းသည် ကမ္ဘာကြီး၏ နောက်ဆုံးကာလ၌ ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေကြသည်ကို ရည်ညွှန်းနေဖော်ပြနေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိကြပါသည်။
ပထမအနေဖြင့်၊ ကာလကုန်ဆုံးရန်နီးကပ်ပြီဟု ဝန်းကျင်ဗေဒဆိုင်ရာ အတိတ်နိမိတ်များ ကဖော်ပြနေသည်။ ယေရှုဘုရား ကြိုတင်ဟောကြားသည်မှာ-
“အရပ်ရပ်တို့၌ ကြီးစွာသောမြေလှုပ်ခြင်း၊ အစာခေါင်းပါးခြင်း၊ ကာလနာ များကြားခြင်းတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။မိုးကောင်းကင်၌လည်း ကြောက်မက်ဖွယ်သောအရာနှင့် ကြီးစွာသော ပုပ္ပနိမိတ်တို့သည်ပေါ်ထွန်း ကြလိမ့်မည်။မြေကြီးပေါ်မှာလည်း လူအမျိုးမျိုး မငြိမ်မသက်စိုးရိမ် ကြောင့်ကြခြင်း၊ သမုဒ္ဒလှိုင်း တံပိုးကြီးခြင်း၊မြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်လတံ့သော ဘေးများမျှော်၍ ကြောက်လန့်သဖြင့် လူအများတို့၏အသက်ဆုံးခြင်း အမူအရာ တို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်” (ရှင်လုကာ-၂၁း၁၁၊၂၅-၂၆)။
“ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်၌” ဖြစ်လတံ့သောဘေးများကို တွေ့မြင်ခြင်းဖြင့် လူအမျိုးမျိုးတို့သည် မငြိမ်မသက် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုဖြင့် အသက်ရှင်ရကြလိမ့်မည်ဟု ယေရှုကြိုတင်ဟောကြားခဲ့သည်။ ဝန်းကျင်ဗေဒဆိုင်ရာ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုသည် လူမျိုးနွယ်စုအားလုံး ရင်ဆိုင်ရကြလိမ့်မည်ဟု ယေရှုဘုရား ကြိုတင်မိန့်ကြားခဲ့သည်။
ဒုတိယအနေဖြင့် နောက်ဆုံးသောကာလ ကုန်ဆုံးရန်နီးကပ်ပြီဟု လူမျိုးရေးနှင့်ဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများကဖော်ပြနေသည်။
“ထိုမှတစ်ပါး လူတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး (လူမျိုးစုဆိုင်ရာ) တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ (နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ)နှင့် တစ်နိုင်ငံရန်ဘက် ပြုကြလိမ့်မည်။ (လုကာ၂၁း၁၀)
လူတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး၊ တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ ဆန့်ကျင်ရန်ဘက်ပြုနေကြသည်ကို ကျွန်ုပ် တို့ယနေ့ တွေ့မြင်ကြရသည်မဟုတ်ပါလား? လူသားတိုင်း၏ အသိပညာအသွယ်သွယ်နှင့် သိပ္ပံအတတ်အားဖြင့် လူတစ်မျိုးနှင့် တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ ရန်ဘက်ပြုကြခြင်းကို ရပ်တန့်စေနိုင်ဖို့ မလွယ်ကူပေ။
တတိယအနေဖြင့်၊ နောက်ဆုံးသောကာလ ကုန်ဆုံးချိန်နီးကပ်ချိန်တွင် ဣသရေလလူမျိုးတို့ သည် လူမျိုးအပေါင်းတို့အားကြီးမားသော ပြဿနာပြုလိမ့်မည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာ၌မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်မှာ-
“ထိုကာလအခါ၌လည်း၊ ထိုမြို့ကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ အားလေးသောကျောက် ဖြစ်စေမည်။ထိုကျောက်ကိုချီသော သူအပေါင်းတို့သည်ကျိုးပဲ့ကြေမွ ကြလိမ့်မည်။လောကီသားအမျိုးမျိုး တို့သည်ယေရှုဆလင်မြို့တစ်ဖက်၌စုဝေးလျှက် ရှိကြလိမ့်မည်။(ဇာခရိ၁၂း၃)
ယနေ့စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့သည် ဣသနေလလူမျိုးများဘက်၌ ရပ်တည်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူမျိုးနွယ်အပေါင်းတို့က ဣသရေလလူမျိုးတို့အား ခေတ်ကာလကုန်ဆုံချိန်တွင် ဆန့်ကျင်ရန်ဘက်ပြုကြလိမ့်မည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ကြိုတင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ဣသရေလလူမျိုးများအပေါ် အလွန်အင်မတန် မုန်းတီးခြင်း အတိတ်နိမိတ် လက္ခဏာပြည့်စုံခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့သည် ခေတ်ကာလ ကုန်ဆုံးချိန်၌ ရောက်ရှိ နေကြသည်ကို ဖော်ပြနေပါသည်။
စတုတ္ထအနေဖြင့်၊ နောက်ဆုံးသောကာလ ကုန်ဆုံးချိန်နီးကပ်ချိန်သည် ခရစ်ယာန်များကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း ရှိလိမ့်မည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်က ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယေရှုဘုရားမိန့် တော်မူသည်မှာ-
“ထိုအမူအရာများ၊ အဖြစ်မှီလူများတို့သည် ငါ၏နာမကြောင့် သင်တို့ကို ဖမ်းဆီးညှင်းဆဲ၍ တရားဇရပ်၌ လည်းကောင်း၊ ထောင်ထဲ၌၎င်းအပ်နှံ ကြလိမ့်မည်။ရှင်ဘုရင်ဝန်မင်းထံသို့ ပို့ဆောင် ကြလိမ့်မည်။(ရှင်လုကာ၂၁း၁၂)။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဆူဒန်နှင့်တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတို့၌ ထိုအဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ပွားနေသည်ကို တွေ့ရကြပါသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီး၊ နေရာဒေသအနှံ့၊ သက်သေခံဝေငှနေသောခရစ်ယာန်တို့အား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းသည် ခေတ်ကာလကုန်ဆုံးချိန်နီးကပ်ခြင်း၏ နိမိတ်လက္ခဏာဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
ပဥ္စမအနေဖြင့်၊ နောက်ဆုံးသောကာလကုန်ဆုံးချိန်သည် ဘာသာရေးအတုအယောင် ဆောင်နိမိတ်လက္ခဏာများက ဖော်ပြနေသည်။ နုတ်ကပတ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကား-
“အဘယ်သူမျှ၊ အဘယ်သို့သောအားဖြင့် သင်တို့ကို မလှည့်ဖြား စေနှင့်။ ထိုနေ့ရက်မရက်မှီ ဖောက်ပြန် သင်းခွဲ ခြင်းသည်အရင်ဖြစ်၍ ဒုဒရိုက်လူတည်းဟူသော ပျက်စီးခြင်း၏သားသည်ပေါ်လာရလိမ့် မည်(၂သက်၂း၃)
ရာချီထောင်ချီပြီး ဝိညာဉ်နိုးထလျှက်ရှိသော တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အာဖရိကတိုက် တစ်ခွင်နှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး၌ တစ်ချိန်တည်း၌ပင်ကြီးမားသောဝိညာဉ်ကျဆင်းမှုများ၊ ခရစ်ယာန် အတုအယောင်များ၊ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူများထဲက ပေါ်ထွက်လာသည်၊ ဤနေရာအနောက်တိုင်း ၌လည်းပေါ်ထွက်လာပြီ။ ဤလက္ခဏာသက်သေများက ကျွန်ုပ်တို့သည် ကပ်ကမ္ဘာကာလ၏ နောက်ဆုံးနေ့ရက်သို့ ရောက်ရှိရကြပြီး ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာရန်နီးကပ်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အသိပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကြီးမားသော လက္ခဏာ သက်သေများနေရာအနှံ့တွင်ဖြစ်ပျက်နေပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ ကြိုတင်ဟောကြားချက်များ ပြည့်စုံလာပြီဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဒံယေလ၁၂း၄နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် “နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလ” ၌အသက်ရှင်ရကြသည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
၂။	ဒုတိယနောက်ဆုံးသောကာလတွင်အသိပညာ၊အတတ်ပညာတိုးပွားပြီး ခရီး သွားလာသူများပြားလာမည်ဟုနုတ်ကပတ်တော်၌မိန့်တော်မူ၏
“သင်ဒံယေလမူကား၊ အမှုကုန်ရသည်ကာလတိုင်အောင် ဤစကား တော်တို့ကိုပိတ်၍ စာစောင်ကိုတံဆိပ်ခတ်ထားလော့။ အများသော သူတို့သည် ထိုစာကိုကြည်ရှု့သောအားဖြင့် ပညာတိုးပွားလိမ့်မည်ဟု ပြောဆို၏(ဒံယေလ၁၂း၄)။
လွန်ခဲ့သောအနှစ်၁၅၀ကစ၍ လူသားတို့၏ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာသည် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် လာသဖြင့် ခေတ်စီးကြောင်းအတိုင်း တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ လျှင်မြန်စွာ ခရီးသွားလာကြရသည်။ ဖရောဖက်ဒံယေလသည် မြင်းတစ်ကောင်၏ အမြန်နှုန်းတစ်နာရီလျှင် ၁၅မိုင်ထက်ကျော်လွန်၍ ဘယ်တော့အခါမှ ခရီးမသွားခဲ့ဘူးပါ။ဒံယေလ၏ ခြေလှမ်း အမြန်နှုန်းသည်လည်းသာမန်လူသား တစ်ဦးကဲ့သို့ပင်ဖြစ်၏။ ပရောဖက်ဒံယေလ အချိန်အခါ တုန်းက အမြန်ဆုံးလူသားတစ်ဦးသည် တစ်နာရီကို ၁၅သို့မဟုတ်၂၀မိုင်လောက် အမြန်နှုန်းဖြင့် ခရီးမသွားကြပါ။ သို့ပါသော်လည်းရေးနွေးငွေ့စက်နှင့် လျှပ်စစ်ပါဝါသုံး စက်ကိရိယာ တပ်ဆင်သော စက်ပစ္စည်းများကတစ်နာရီကို၂၀-၃၀မိုင် အမြန်နှုန်းဖြင့် ထိုအချိန်က သွားကခဲ့ကြသည်။ လူသိများသောအင်နရီဖောက်သည်အတွင်း၌မီးလောင် ကျွမ်းဝေပြီး ပျံသန်းသော စက်ဖြင့်တစ်နာရီကို၂၅-၃၅အထိ၊နောက်ဆုံးတွင်မိုင်၇၀အထိအမြန်နှုန်းဖြင့် သွားလာခဲ့သည်။အခုခေတ်တွင်တစ်နာရီကို မိုင်၆၀၀အမြန်နှုန်းကားတွေရှိပါပြီ။ တစ်နာရီလျှင်လေယာဉ်ပျံ တစ်စင်းသည် မိုင်၂၀၀၀အမြန်နှုန်းဖြင့်ပျံသန်းနိုင်ပြီးတစ်နာရီလျှင်အာကာသယာဉ်သည် တစ်နာရီမိုင်၂၄၀၀၀အထိအမြန်နှုန်းဖြင့်သွားလာနေပြီဖြစ်သည်။ ယနေ့ဆိုလျှင် ဂျက်လေယာဉ်ပျံ သည် ကမ္ဘာကို၂၄နာရီအနည်းဆုံးဖြင့် ပတ်၍ပျံသန်းနိုင်သည်။ လူတစ်ဦးသည် အာကာသလွန်းပျံယာဉ် ဖြင့်ကမ္ဘာကိုမိနစ်၈၀အတွင်းတစ်ပတ်ပတ်၍သွားနိုင်သည်။ ပြီးတော့ ၁စက္ကန့်အတွင်း ရေဒီယိုသတင်း များသည်ကမ္ဘာစွန်းမှဟိုအစွန်းထိလျှင်မြန်စွာရောက်ပျံနေပြီ။ယနေ့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင် များကကမ္ဘာကို တစ်ပတ်ပတ်ရန် အလင်းအမြန်နှုန်း တစ်စက္ကန့်လျှင် ၇ ကြိမ်လှည့်ပတ်နိုင်ရန် ဆွေးနွေးနေကြပြီ။ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အား ဆန့်ကျင် ကိရိယာများ ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိပါက ထိုအရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ဒဗလျူ.အီးဘလက်စုတုန်း၏ ဂန္ထဝင်မြောက်စာအုပ်ဖြစ်သော (Jesus is coming) ယေရှုကြွလာ နေပြီ၊ ၁၉၁၇ ခုနှစ်ကပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည့်မှာ-
ယေရှုကြွလာခါနီးပြီဟု ယုံကြည်ရခြင်း၏ အထောက်အထားများက မည်သည့်အရာတွေ ဖြစ်သနည်းဟု ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့ လိုနေပေပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည့်အတိုင်း ကမ္ဘာ့နေ့ရက်ကာလ အဆုံးတိုင်ပြီဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်လောက်သော သက်သေအထောက်အထားများကို အောက်ဖော်ပြပါအချက် ၇ ချက်ဖြင့်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ပထမအနေနှင့် အသိ၊အတတ်ပညာနှင့် ခရီးသွားလာမှုတိုးတက်လာ ခြင်းဖြစ်သည်။
မကြာသေးခင်နှစ်များနှင့် ယခုမျက်မှောက်နှိုင်းယှဉ်ပါသော် အံ့ဩဖွယ် ခရီးသွားလာခြင်းနှင့် အသိပညာ၊အတတ်ပညာနှစ်ခုစလုံး တိုးတက် ပြောင်းလဲနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
ခရီးရှည်အဝေးကို သွားဖို့အတွက် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခဲ့သော အင်္ဂလန် နိုင်ငံသူအမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး၏ ဖြစ်ရပ်ဆန်းတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ခရီး ထွက်ခွာတော့မည့်သူကို သူ့အပေါင်းအသင်းများက ဝိုင်းဝန်းကူညီခဲ့ ကြ၏။ ထိုအမျိုးသမီးကြီးအား ပို့ဆောင်နုတ်ဆက်ဖို့ရန် လူအုပ်ကြီး တို့သည် တစ်မိုင်မကလမ်းလျှောက်ပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။တစ်ကယ်တော့ ထိုအမျိုးသမီးကြီး၏ ခရီးလမ်းဆုံးသည် ၁၅မိုင် ခန့်သာရှည်လျားသည်။
လူအုပ်ကြီးသည် ထိုအမျိုးသမီးဟာ နုတ်ဆက်ဖို့ရန်ရောက်လာကြပြီ အကြောင်းမှာ ထိုအမျိုးသမီးကို သူတို့နောက်ထပ်တွေ့ကြမည်မဟုတ်၊ ၁၅မိုင်အကွာအဝေး၌ သွားရောက်မည် ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်၏။ ယနေ့ကမ္ဘာ့ ဆွဲငင်အားဆန့်ကျင်ဘက်နိယာမတရားတွေ့ရှိ အသုံးပြုနိုင်မည်ဆိုပါကလူတို့သည် အလင်းတန်းအမြန်နှုန်းတစ်စက္ကန့်လျှင်ကမ္ဘာကို ၇ ကြိမ်ပတ် တော့မည်ဖြစ်သည်။ ဘလပ်စတုန်း ပြောကြားသည်မှာ-
အခုဆိုရေနွေးငွေ့ဓါတ်အားနှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားတို့ကို ချိတ်ဆက် တီထွင်သော စက်ပစ္စည်းများကြောင့် ကုန်းကြောင်း၊ ရေကြောင်း ခရီးကို ဇိမ်ရှိရှိ သွားလာနိုင်ကြပြီဖြစ်သည်။ ထို့အတွက် လူတစ်ဦးသည် ဇိမ်ခံလျှက် ကမ္ဘာကြီးကို ရက်ပေါင်း (၆၀)အတွင်း လှည့်ပတ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဟူ၏။
၁၉၁၇ ခုနှစ်လောက်တုန်းက ထိုပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းသည် ဘလက်စတုန်းအဖို့ အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ပုံပေါ်၏။ သည့်မတိုင်ခင်ဂျူလီဗန်နီက “ကမ္ဘာကိုရက်ပေါင်း(၈၀)နှင့်လှည့်ပတ် ခြင်းဟူသော ကျော်ကြားသော သိပ္ပံစိတ်ကူးဝတ္ထုကိုရေးသားခဲ့သည်။ ၎င်းစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းကို မင်းသားဒေးဝိဒ်နီဗင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို ရုပ်မြင်သံကြား၌ မိတ်ဆွေတို့ တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ပြီးတော့ ဂျူလီဗန်နီကရယ်ချင်ဖွယ်စိတ်ကူးနှင့် ကမ္ဘာကြီးကိုမီးပုံးပျံဖြင့် ရက်ပေါင်း(၈၀)အတွင်း ပျံသန်းမည်ဟု ရေးသားခဲ့သေးသည်။ ကနေ့ခေတ်တွင် လူတိုင်းလိုလိုကမ္ဘာကြီးကို နာရီ(၂၀)အတွင်း လည်ပတ်နိုင်ပြီဖြစ်၍ ရက်ပေါင်း(၈၀)ကြာလည်ပတ်နိုင်သည်ဟူသော လေသံသည် ခေတ်နောက်ကျ ကျန်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးသည် အာကာသယာဉ်ဖြင့် ထိုထက်မကသော အမြန်နှုန်းဖြင့်သွားလာနိုင်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့ သမ္မာကျမ်းစာက မိန့်ဆိုသည်မှာ-
“သင်ဒံယေလမူကား အမှုကုန်ရသည့်ကာလတိုင်အောင် ဤစကားတော်တို့ကို ပိတ်၍ စာစောင်ကို တံဆိပ်ခတ်ထားလော့၊ အများသောသူတို့သည် ထိုစာကိုကြည့်ရှု့သောအားဖြင့် ပညာ တိုးပွားလိမ့်မည်ဟု ပြောဆို၏။(ဒံယေလ၁၂း၄၀)။
ကျွန်ုပ်၏အဘိုးအဘွားနှင့်မိဘနှစ်ပါးအသက်ရှင်စဉ်ကာလရာစု(၂၀)၌ထိုအရာများ ဖြစ်ပျက် လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အဘွား မွေးဖွားသည့်ရပ်၌ မော်တော်ကားပင် မရှိခဲ့သေးပါ။ လူသားတို့ လည်း လေယာဉ်ပျံကို မတီထွင်ခဲ့ကြသေးပါ။ ကျွန်ုပ်၏အဘွားသည် လေထုထဲ၌ ပထမဆုံး လေယာဉ်စီးပြခဲ့သော ရိုက်စ်ညီနောင်နှစ်ပါးကို မှတ်မိသည်။ အဘွားသည် ဂြိုလ်တုဖြင့် ကမ္ဘာကို လှည့်ပတ်ပျံသန်းခဲ့သော လူသား အိုဗစ်ကို မြင်တွေ့ခဲ့သေး၏။ ထိုအရာသည် တစ်ဦးတစ်ယောက် သက်ရှိထင်ရှားစဉ်ပင်၌သာ ဖြစ်၏! သိပ္ပံဆိုင်ရာ တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အမြန်နှုန်းဖြင့် ခရီးသွားလာကြခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာကြီး၏ အဆုံးနေ့ရက် ကာလသို့ တဖြည်းဖြည်း နီးကပ်စွာ ရွေ့လျားနေပြီဖြစ်သည်ကို အသိပင်ဖြစ်ကြ၏။
ဒေါက်တာ အမ်.အာရ်ဒီဟန်း၊သူ့၏စာအုပ်၌ နိမိတ်လက်ဏာ သက်သေထင်ရှားသော အချိန်ကာလ၌ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ-
ပရောဖက်ဒံယေလက ကမ္ဘာကုန်ဆုံးချိန်နှင့် ပတ်သက်၍ လက္ခဏာ သက်သေနှစ်ရပ်ကို ပေးခဲ့သည်။ ဤအရာများ ဖြစ်သည် (၁) အများသော သူတို့သည် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ကူးလူးသွား လာလိမ့်မည်။ (၂) အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ တိုးပွားကြလိမ့်မည် ဟူ၍ ဖြစ်၏။ ခရီးသွားလာရေး လက္ခဏာသက်သေနှင့် ပညာရေး လက္ခဏာ သက်သေဟု ကျွန်ုပ်ခေါ်တွင်ပါသည်။ ကပ်ကမ္ဘာ ကာလ ၏ အဆုံးနေ့ရက်သည် အိပ်မက်ရုံပါရုံ မမက်ဘူးသော အသိအတတ်ပညာ တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ကို သိပ္ပံပညာရှင်များ တွေ့ရှိကြရပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲမထားသော ခရီးသွားလာရေး တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်း၏ ထူးခြားသော လက္ခဏာ သက်သေများ က သက်သေထူပါသည်။ ဒံယေလမိန့်ဆိုသည်ကား “လူသားတို့ သည် “တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ကူးလူးသွားလာ” ကြလိမ့်မည် ဟုဆို၏။ ကြိုတင်ပြင်ဆင် ရေးဆွဲမထားသော ခရီးသွားလာရေး ခေတ်ကာလ ရောက်လိမ့်မည်ဟု ကြိုတင်ဟောပြောထားသည်။ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်က ပရောဖက်ဒီယေလ ရေးသားခဲ့သော ထိုကျမ်းစကားသည် ထိုကျမ်းစာဖတ်ရှုသူတို့အား တုန်လှုပ်ချောက် ခြားစေသည်။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်ကြီး၌ ထိုပရောဖက်စကား များပြည့်ပြည့်စုံစုံ လက္ခဏာထင်ခြားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးက ဆွဲဆောင်မှုမရှိ ကျုံးကျဉ်းသွားခဲ့ရပြီ။ ယခုသည် မြန်ဆန်သော အရှိန်အဟုန်နှင့် ခရီးသွားလာသော ခေတ်ရောက်ပေပြီ။ အစ၌ ဆိုလျှင် ရေနွေးငွေ့မှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်ပါဝါသုံးအဆင့် တိုးတက် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီ။ အစ၌ မီးရထားကိုသာ အသုံးပြုကြပြီး နောင်အခါ ဒီဇယ်ဆုံးယာဉ်များကို ခရီးသွားလာရေးအတွက် အသုံးပြုကြသည်။ အခုဆို ဂျက်လေယာဉ်ပေါ်ပြီး တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ဂြိုလ်တုများနှင့် သွားလာနေကြပါပြီ။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ “တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ကူးလူးသွားလာကြလိမ့်မည်” ဟူသော ကြိုတင် ဟောကြားချက်ကို မေ့မေ့လျော့လျော့ မမေ့သင့်ကြချေ။
ကနေ့ မြင်တွေ့ရသော ဒံယေလ၏ ကြိုတင်ဟောကြားချက်များကို နက်နဲစွာ တွေးခေါ် ကြပါစို့လား။
၃။	တတိယ၊ ကပ်ကမ္ဘာကာလ၏ အဆုံးနေ့ရက်သည် လူသားတိုင်း မနားမနေ ခရီးသွား လာကြလိမ့်မည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်က မိန့်ဆိုသည်။
“သင်ဒံယေလမူကား အမှုကုန်ရသည့် ကာလတိုင်အောင် ဤစကား တော်တို့ကိုပိတ်၍ စာစောင်ကို တံဆိပ်ခေတ်ထားလော့။ အများသော သူတို့သည် ထိုစာကိုကြည့်ရှုသောအားဖြင့် ပညာတိုးပွား လိမ့်မည်ဟု ပြောဆို၏ (ဒံယေလ ၁၂း၄)
လူသားတို့သည် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ကူးလူးသွားလာနေကြသည်မှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း? ဟု မိမိကိုယ်ကို မေးကြည့်ပါ။ ဘာကြောင့် အလွန့်အလွန်ခရီးသွား လုပ်သားများပြား ကြားရသနည်း။ လူသားတို့ကို အနားပေး မောင်းနှင်နေသော အကြောင်းရင်း တစ်ခုက တစ်စုံတစ်ရာသည် သူတို့၏ စိတ်နှလုံးသားကို မရပ်မနား ရွှေ့လျားခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲ ခြင်းက မောင်းနှင်နေသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်မိပါသည်။
ကမ္ဘာဦးကျမ်း၌ ကာဣနပြောသောစကားကို သတိရကြပါ။
“ကျွန်ုပ်ကို မြေကြီးပြင်မှ ယနေ့နှင်ထုတ်တော်မူပြီ။ မျက်နှာတော်ကို လည်း မမြင်ရ။ မြေကြီးပေါ်မှာ ပြေးရသောသူ၊ အရပ်ရပ်၌ လည်ရ သောသူဖြစ်ရ၏။ (ကမ္ဘာဦး ၄း၁၃)
ကာဣနသည် အပြစ်တစ်ခုကို ကျူးလွန်ခဲ့သည်။ သူ့ညီကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ် အကျိုးအဆက်က သူ့အား မြေကြီးပေါ်မှာ ပြေးရသောသူဖြစ်စေပြီး မပြောင်းလဲနိုင်သော ခရီးသွားç သွားလာခြင်းနှင့် တစ်နေရာတည်း၌ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ အခြေချနေထိုင်၍ မကျေနပ်စေခဲ့ပါ။ ကနေ့ လူသားများ တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ ကူးလူးသွားလာကြရခြင်း၏ အခြေခံအကြောင်းရင်းသည် မိမိတို့၏ အပြစ်က မောင်းနှင် နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည် လက်ခံပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်သူတို့သည်လည်း အပြစ်ရဲ့ အကျိုးအဆက်ဖြစ်သော လောဘ၊ အတ္တကြောင့် လာရောက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန် အသက်တာ ကောင်းမွန်စွာ တည်ဆောက်ဖို့ လာကြသူများ မဟုတ်ကြပါ! လောဘ အတ္တရမက်ကြောင့်၊ ငွေမြောက်များစွာ ရှာဖွေဖို့ လာကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ လာရောက်ပညာသင်ကြားသူများအား စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူဖြစ်ခိုင်းဖို့ မလွယ် ကူပေ။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကြီးမားသော ဝိညာဉ်နိုးထမှု ခေတ်သစ်သမိုင်းတွင် နေပြီဖြစ်သည်။ သို့ပါသော်လည်း ဤနေရာ အမေရိကားသို့ လာရောက်ပညာသင်ကြားကြသော ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများသည် ငွေအမြောက်အမြား ရရှိရေးကိုသာ စိတ်ဝင်စားကြသည်။ ထိုသူတို့သည် အလောင်းအစားလုပ်ရန် လာဗစ်ဂစ်မြို့ကို ကျောင်းပိတ်ရက်အတွင်း စနေတနင်္ဂနွေနေ့များတွင် သွားလိုကြသည်။ ငွေမြောက်များစွာ ရလိုသဖြင့် ဘုရားကျောင်း သွားဖို့ထက် အလုပ်လုပ်လို ကြသည်။ ငွေကြေးသည် သူတို့၏ ဘုရားသဖွယ်ဖြစ်သဖြင့်၊ ငွေကြေးသည် အမေရိကားနိုင်ငံ၏ ဘုရားသဖွယ် ဖြစ်နေတော့၏။
စပိန်ဘာသာစကားပြောသူများသည်လည်း မပြောင်းလဲနိုင်အောင် ရွှေ့လျားရွှေ့ပြောင်းကြ ပြီး မပြောင်းလဲနိုင်အောင် ပြောင်းလဲနေကြပြီ။ ဤသည် ထိုသူတို့၏ မျိုးဆက်သားသမီးများကို ပျက်စီးစေသည်သာမက သူတို့ကိုယ်ကိုပင် ပျက်စီးစေသည်။ တစ်နေရာ၌ တည်ငြိမ်စွာ အခြေချနေထိုင်ပါ! ဤနေရာ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ အခြေချနေထိုင်ပါ!
အေ.ဒဗလျူတိုဇာက တစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းက ကျွန်ုပ်တို့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်များအဖြစ် နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဟု ပြောကြားခဲ့ဖူးပါသည်။
ကြံ့ခိုင်တောင်းတင်းခိုင်မာသော သင်းထောက်တစ်ယောက်သည် သူမွေးဖွားရာနှင့် သေပြီးသဂြိုလ်ရာ အရပ်ဒေသ၌ သူ့အသက်တာ တစ်ခုလုံးကို အသုံးခံခဲ့သည်။ ခေတ်သစ်ခြေသလုံးတိုင် အစုအဖွဲ့ မတိုင်ခင်ထိ သူသည် ခိုင်မာစွာ အသက်ရှင်ခဲ့ပါသည်။ သူ၏ အမှားအယွင်းတစ်ခုက အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့နှင့် အေးဆေးစွာ အနား ယူနေထိုင်ဖို့ပင်ဖြစ်သည်။ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ အသက်ရှင်နိုင် ဖို့ လိုအပ်သော အကူအညီ အထောက်အံ့မှု ရရှိခဲ့သည်ဟု မကြားပါ။ ဓါးသွေးကျောက်နှင့် နဖူးတိုက်လျက် သားသမီးဆယ်ယောက်ကို တောင်ယာလုပ်ငန်းဖြင့် ကျွေးမွေးရရှာ၏။ ဒီကြားထဲ တစ်လလျှင် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ် သို့မဟုတ် နှစ်အုပ်ကို ဖတ်ဖြစ်သေး၏။ သူသည် အသက် ၈၇ နှစ်အရွယ်တွင် အတောင်တစ်ရာကျယ်ဝန်း သော ခြံမြေထဲက သစ်အယ်ပင်မှ ရှည့်တစ်ကောင်ကို မျက်မှန်မတပ် ဒါဇင်မက ပြေးလွှားပြီး သေနတ်ဖြင့် လက်တန်းပစ်သေး၏။ နောက်ဆုံး သူ့အသက်တာ ကုန်ဆုံးကွယ်လွန်ချိန်တွင် ကျန်ရစ် သော မိသားစုများက လွမ်းဆွတ်သတိရကြသည်။ သူ၏အပေါင်း အသင်းမိတ်ဆွေများကလည်း ထိုသူ၏ တန်ဖိုးရှိ အကောင်းဆုံး အသက်ရှင်ခဲ့သော အသက်တာကို အတုယူခဲ့ကြပါသည်။ သူ၏မြေး တစ်ယောက်သည် သာလွန်သော ယောက်ျm;ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာကာ နွေဒဏ်၊ ဆောင်းဒဏ်၊ မိုးဒဏ်ခံနေရသော ခြေသလုံး အိမ်တိုင် အခြေအနေမှ တိုက်တန်းတိုက်ခန်းများအဖြစ် ပြုပြင် ပြောင်းလဲပေးသူဖြစ်သည်။ (အေ.ဒဗလျူတို၏ နွေလယ်ခေါင် ရူးသွပ်ခြင်း” ငါဘုရားသခင်သည် စောင့်ထိန်းမှု၏ ခရစ်ယန် ပုံနှိပ်ခြင်း ၁၉၇၀ ခုနှစ် ထုတ်ဝေ၊စာ ၁၂၇)
ဘာကြောင့် အမေရိကားရှိ လူသားများ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ သွားလာနေကြ သနည်း? ဘာကြောင့် မိမိတို့အသင်းတော်ကို ချန်ထားခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံမှ တစ်နိုင်ငံသို့ ကူးလူး သွားလာနေကြသနည်း?။ အမြဲတမ်းလိုလို လောဘကြောင့် ငွေမြောက်မြားစွာ ရလိုသောကြောင့် ဖြစ်၏။ ကျွန်တော်ဆရာကြီး ဘီလီဂရမ်ဟမ် ပြောသမျှကို သဘောမတူပါဘူး။ သို့ပေမယ့် အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ ကြီးမားဆုံးသော အပြစ်သည် လောဘ၊ ရမက်ကြောင့် ငွေမြောက်များစွာ ပိုင်ဆိုင်လိုခြင်းဟူသောအဆိုကို သဘောတူပါသည်။
လူငယ်များခင်ဗျား၊ ရပ်တန့်လို့မရနိုင်သော တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ရွှေ့လျားခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ငွေမြောက်များစွာ ပိုင်ဆိုင်လိုမှု ရမက်များက သင်၏အနာဂတ် အသက်တာကို အနာတရဖြစ်စေမည်။ သင့်အား သင့်မိဘများမှ ကျောင်းမှထုတ်ပယ်နိုင်ပြီး အပေါင်းအသင်း အများထဲမှ တကိုယ်တည်း အထီးကျန် ပိတ်နှောင်ထားခဲ့ခြင်းခံရပါမည်။ ၎င်းသည် ဝမ်းနည်း ကြေကွဲဖွယ် ဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် အမေရိကားရှိ လူငယ်များသည် စိတ်မချမ်း သာစရာ တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်ကြရသည်။ အကယ်၍ သင်သည် မရပ်မနား တစ်နေရာ မှတစ်နေရာသို့ ရွှေ့လျားသွးနေမည်ဆိုပါ သင်၌ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော မိသားစုနှင့် စစ်မှန် သော အပေါင်းအသင်းရှိမည်မဟုတ်ပေ။
သူတစ်ပါးက သင့်အား ကောလိပ်ကျောင်းပြေးနေသူဟု အပြောမခံပါနှင့်။ ဤအသင်းတော် မှ ကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်နေသော ကျောင်းသူ^သား ၁၅ မှ ၂၀ ယောက် အထိ ရှိပါတယ်။ တည်ငြိမ်စွာနှင့် ဤနေရာ၌နေပြီး ကျောင်းတက်ပါ။ တည်ငြိမ်စွာဖြင့် ဘုရားကျောင်းပုံမှန်တက်ပြီး မှန်ကန်သော မိတ်ဆွေအဖြစ် အကျွမ်းတဝင်နေပါ။ ဘာကြောင့် တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်ဆန်လိုသနည်း?။ မိသားစုဆီလာပြီး အသင်းတော်သို့သွားပါ ။ အရေးကြီးဆုံး သင့်လုပ်ဆောင်ရမည်မှာ စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်တစ်ဦး ဖြစ်လာဖို့ပါ။ တည်ငြိမ်းစွာ ဖြင့် နှစ်ခြင်းအသင်းတော် လောအိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၌ ထိထိမိမိပါဝင်စမ်းပါ။ အဝေးသို့ မသွားပါနှင့်။ ၎င်းက သင့်အားနောက်ထပ် အထီးကျန်စေဦးမှာဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့် အထီးကျန် ဆန်စွာဖြင့် အသက်ရှင်လိုပါသနည်း? မိသားစုဆီပြန်လာပြီး အသင်းတော်သို့ သွားရောက်ပါဝင် ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် အသင်းတော်ကို စွန့်ခွာပါက သင်သည် သင်၏အခြေခံအမြစ်ကို စွန့်ခွာခြင်းဖြစ်၏။ သင့်အသက်တာထဲက အဓိကအချက်ကို စွန့်ခွာခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ကာဣန စွန့်ခွာခဲ့ရ၏။ သူ၏ဘ၀အသက်တာနှင့် သူ့သားသမီးတို့၏ ဘ၀အသက်တာ ပျက်စီး စေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်မှ ထွက်ပြေးပြီး နောဒပြည်သို့ အခြေချနေထိုင် ခြင်းက သူသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဦးဆုံး ဘုရားမဲဝါဒီသမား ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ ဒေဟန်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ -
နောဒ၏ စာပါအရ အဓိပ္ပါယ်မှာ “လှည့်လည်သွားလာသော နယ်မြေ” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ဟေလသစကားဖြင့် လှည့်လည်သွားလာသော နယ်မြေဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ ၎င်းက တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ကူးလူးသွားခြင်းဟု ဆိုလိုသည်။ ကာဣနသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အခြားဝေးလံသော အရပ်ဒေသတို့၌ လှည့်လည်သွားလာသည်ဟု ရိုးရာထုံးတမ်း အစဉ်အလာအရ သိရသည်။ ယေဘုယျအနက်ဖွင့် ပြောဆိုသည်မှာ ကာဣနသည် သူ့အိမ်မှ ဝေးလံသောအရပ်ဒေသ၌ လှည့်လည် သွားလာသည်ဟု လာ၏။ ၎င်းက အနားယူခြင်းမရှိ၊ ဝေဒနာ အတိခံစားလျက် လှည့်လည်သည်ဟု ဆို၏။
ရွှေ့လျားခြင်း၊ ရွှေ့လျားခြင်း၊ ရွှေ့လျားခြင်း၊ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမရှိခင် လူသားများ အားလုံးသည် ကာဣနပြုသကဲ့သို့ ပြုမူခဲ့ကြသည်။ ခရစ်တော်ယေရှုက လူသားများသည် နောက်ဆုံးသော ကာလ ကာဣနကဲ့သို့ ပြုမူကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
“လူသားကြွလာသောအခါ နောဧလက်ဆက်၌ဖြစ်သကဲ့သို့ ဖြစ်လိမ့် မည် (ရှင်မဿဲ ၂၄း ၃၇)။
ယနေ့တွင်လည်း ထိုကဲ့သို့ ပြုမူနေကြပြီ၊ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်ခင် လူသားများတစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ရွှေ့လျားသည်နည်းတူ ယနေ့လူသားများ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ကြသည်။
“များသောသူတို့သည် ထိုစာကို ကြည့်ရှုသောအားဖြင့် ပညာတိုးပွား လိမ့်မည်ဟု ပြောဆို၏။ (ဒံယေလ ၁၂း၄)။
ဘာကြောင့် လူသားများ တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ ကူးခတ်သွားလာသနည်း? ကျွန်တော် ပြောခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း လောဘရမက်ကြောင့် ငွေမြောက်များစွာ ပိုင်ဆိုင်လို၍ဖြစ်သည်။
နုတ်ကပတ်တော် မိန့်တော်မူသည်ကား -”နောင်ကာလသည် ခဲယဉ်းသောခေတ်ကာလဖြစ်မည်ဟု သိမှတ်ကြလော့၊ အဘယ်သို့ နည်းဟူမူကား လူတို့သည် ကိုယ်ကိုကို ချစ်သောသူ၊ ငွေကိုတပ်မက်သောသူ ... (၂ တိမောတေ ၃း၁-၂) ဟူ၍ဖော်ပြသည်။
နောက်ဆုံးသောကာလ၌ လူသားတို့သည် “မိမိကိုမိမိ ချစ်သောသူနှင့် ပိုက်ဆံကိုချစ်သော သူ” ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအရာသည် ဂရိမူရင်းစာအရ ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာမှ တစ်နေရာသို့ ကူးလူးသွားလာချင်စိတ်သည် လောဘစိတ်ကြောင့်နှင့် အခြားသော အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင် သည်ဟု ကျွန်ုပ်ပြောနှင့်ပြီ။ လူသားတို့ ပြောကြသည်မှာ ဤအသင်းတော်၌ပဲ နေထိုင်ပြီး အသင်းတော်ကို ကူညီပါမည်။ သို့သော်လည်း ထိုနေရာသို့ သွားရောက် ပိုက်ဆံရှာရပါအုံးမည်ဟု ပြောကြသည်။ ၎င်းကျောင်း သည် ကောင်းမွန်ပါက ထိုကျောင်းသို့ ကျွန်ုပ်တက်ပါမည်ဟု လူတွေပြောကြသေးသည်။ အနာဂတ်တွင် မြောက်မြားစွာ ငွေရရှိဖို့သည် သင်တို့ကျောင်း ပညာအရင်ဆုံး သင်မှပဲ ထိုအခွင့်အလမ်း ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် လောဘရမက်၊ အတ္တသမားဖြစ်သောကြောင့် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ သွားလာလှည်လည်ရခြင်းဖြစ်သည်။
ယေရှုသည် ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ခု ပြောလိုသည်မှာ၊ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ “ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံ တော်နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ရှေးဦးစွာ ရှာကြလော့၊ နောက်မှ ထိုအရာများကို ထပ်၍ပေးတော်မူလတံ့ (ရှင်မဿဲ ၆း၃၃) ဟုဆို၏။
ထို့ကြောင့် မစ္စတာဗန်စီယာ ထိုကဲ့သို့ ရှာဖွေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ထို့ကြောင့် မစ္စတာ ဂရိဖက်စ် ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ထို့ကြောင့် ဒေါက်တာချန် ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ တာဖြစ်တယ်။ ထို့ကြောင့် မစ်ဆလာဇာနှင့် ဒေါက်တာကေကန်တို့ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်၏ဇနီး ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသင်းတော်၌ ရှိ ခေါင်းဆောင်များက နိုင်ငံတော်နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ရှေးဦးစွာ ရှာဖွေကြတာ ဖြစ်တယ်။ ထိုကဲ့သို့သော မိသားစုကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြင့် တွေ့မြင်ရကြတာဖြစ်တယ်။ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ကြဖို့ သင့်အား အလိုရှိသည်။ တစ်နေရာပြီးတစ်နေရာ ပြေးလွှားမနေကြပါနှင့်။ ဤနေရာ၌ပင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနေပြီး နိုင်ငံတော်ကို ဦးစွာ ရှာဖွေကြပါ။
လောက ဥစ္စာ ပစ္စည်းပေးကာ ဝယ်၍မရနိုင်ပါ
ရွှေ၊ ငွေ ဥစ္စာ ပစ္စည်း သင်၌ရှိစေကာမူ
တကယ်စစ်မှန် ငြိမ်သက်ခြင်းသည် ယေရှုမှတစ်ပါး
ကျွန်ုပ်သည် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၌ နေထိုင်သည်မှာ အနှစ် ၆၀ ကျော်လာပြီဖြစ်ည်။ လော့စ်အိန်ကျယ်လိတ်မြို့ ကျွန်ုပ်၏ သာသနာသက်တမ်း ၄၅ နှစ် တိုင်ပါတော့မည်။ အစတွင် လူဖြူအသင်းတော်၌ ဦးဆောင်ပြီး၊ တရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်ကို ဦးဆောင်သည် အခုဆို ဤအသင်းတော်၌ပေါ့ဗျာ၊ မကြာခဏဆိုသလို ဤလော့အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့ အသင်းတော်ကို စွန့်ခွာ ချင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်က ဤနေရာ၌ပင် နေစေလိုသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်းထန်သော ခံစားမှုနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများက ကျွန်ုပ်အား ဤနေရာ၌ အခြေချနေထိုင်ရန် အခက်တွေ့စေခဲ့သည်။ သို့ပါသော်လည်း ပို၍ “ကောင်းသောနေရာဒေသ”၌ အခြေချနေထိုင်ဖို့ထက် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်း နေထိုင်ဖို့က ပို၍အရေးကြီးကြောင်း သိလာခဲ့ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဖရိက၌ နာမည်ကျော်သာသနာပြု ဆရာကြီး စီ.တီစတက် ပြောကြားသည်မှာ “အလုံခြုံဆုံးသောနေရာ၌ နေခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်၏ ဗဟို၌” နေထိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်၏။ ကျွန်တော်လည်း သူ့၏အဆိုနှင့် တစ်ထပ်တည်းကျပါသည်။ အခုတော့ ဤမြို့၌ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ ကျောင်းသွားလာကြသော အပေါင်းအသင်းများ ဤမြို့ကို စွန့်ခွာသွား ကုန်ကြပြီလေ။ ငါ့ရဲ့အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများ သေသောသူများရှိသလို အခြားသို့ ပြောင်းရွှေ့ သူများလည်းရှိပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းအားလုံး လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့ကို စွန့်ခွာကြကုန်ပြီ။ ဤနေရာ၌ နေထိုင်ဖူးသူတွေလေ။ အခုဆိုရင် ကျွန်ုပ်၏သား ၂ ယောက်၊ ဇနီးနှင့် ကျွန်တော် ဟိုင်မာကလွဲလို့ ဘယ်သူငယ်ချင်းမှ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၌ မရှိကြတော့ဘူး။ ကျွန်တော်သည် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၌ များစွာသော အပေါင်းအသင်းထဲက ကျန်ကြွင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤမြို့ကြီးကို စွန့်ခွာသူတွေထဲက တစ်ချို့သည် သာ၍ကောင်းသော ဘ၀ကိုမရရှိကြသလို အချို့တွေလည်း မိမိတို့ရှာဖွေနေသော သာ၍ကောင်းသော ဥစ္စာစည်းစိမ် မတွေ့ရကြသေးဘူး။ ဤမြို့ကြီးကို စွန့်ခွာကြသော သူတို့ရှာဖွေနေတဲ့ အရာထက်၊ ပြည့်စုံသောဘ၀၊ သာ၍ချမ်းသာသော ဘ၀နှင့် သာ၍အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အရာ အခုကျွန်ုပ်၌ များစွာရှိပါပြီ။ ဤမြို့၌ တည်ငြိမ်စွာနေ ကြပါ။ သင်းအုပ်ဆရာကြီးများတို့သည် ဤမြို့၌သာ တည်ငြိမ်စွာနေပါ၊ ဤဒေသန္တရ အသင်းတော်၌သာနေပါ၊ ပြင်ပ၌ ဘာဆိုဘာမှ မရှိဘူး ဟု အခြားခြားသော မြို့ကြီးတို့၌ လည်း ဟောကြားသင့်ပါသည်။
အသင်းတော်ကို စွန့်ခွာပြီး အိမ်ကိုပြန်လာကြသော သူတို့အဖို့ အိမ်ပြန်အလာနေ့ဟူ၍ ရှိတတ်၏။ အိမ်ကိုပြန်လာကြပြီး အသင်းတော်ရှိရာသို့ ပြန်သွားကြသော အသင်းမြောက်များစွာ ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ အိမ်ကိုပြန်လာပြီးမှ ဘုရားကျောင်ကို ပြန်သွားရတဲ အဖြစ်မျိုးတော့ မရှိသင့်ဘူးဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါတယ်။ မိမိရှိနေသောမြို့နှင့် အသင်းတော်ဘုရားကျောင်းကို စွန့်ခွာ ပြီး အိမ်ပြန်လာနေ့ဟူ၍ မရှိသင့်ပေ။ နေထိုင်သည့် အိမ်၌နေခြင်းသည်သာ ကျွန်ုပ်တို့၌ ရှိသင့်သည်။ မိမိတို့နေထိုင်သည့်နေရာအိမ်၌သာ ထိုင်နေကြရမည်။ မိမိအိမ်ကို စွန့်ခွာကြသူများကို ကြည်ညိုလေးစားစရာ မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းတော်၌ ဘာဖြစ်မည်ဟု သင်ထင်သလဲ? အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ဘာတွေဖြစ်လာမည်နည်း? လူဖြူများကြတော့ မြို့ကြီးတွေကို စွန့်ခွာကြပြီ။ သူတို့၏ အသင်းတော် တွေကို စွန့်ခွာကြပြီ။ ထိုကဲ့သို့သော အရာများကို ဆန့်ကျင်တရားဟောရမည်။ ၎င်းက အမေရိကန်လူမျိုးများကို သတ်ဖြတ်လုနီးဖြစ်နေပြီး လူဖြူများ အဝေးကိုစွန့်ခွာကြခြင်း၊ သူတို့၏ အသင်းတော်ကို စွန့်ခွာခြင်းနှင့် သူတို့မြို့များကို စွန့်ခွာခြင်း လုပ်ရပ်လောက်ပို သော ဤလူမျိုးကို ဖျက်ဆီးခြင်းဟူ၍ မရှိပါ။ ၎င်းကို “အဖြူရောင်လေကြောင်း” ဟု ခေါ်သည်။ ၎င်းလုပ်ရပ်က အမေရိကန်ကို ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်သည်။ အဝေးသို့ စွန့်ခွာ ခြင်းကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ။ မိမိမြို့၌ အခြေချနေထိုင်ပါ။ ထိုအကြောင်းအရာကို ကျွန်ုပ်တို့ ဝေငှဖို့ လိုအပ်နေပြီ။ တချို့သော သူတို့က ထိုဒေသနာကို ကြိုက်ကောင်းကြိုက်မည်။ သို့သော် အချို့သော သူတို့က ကြားလိုမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘာနဲ့တူနေပြီလဲ? ဟူသော အကြောင်းအရာကို ဟောရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတို့နားထောင်ရန် လိုအပ် နေသော တရားကိုသာ ဟောရပါမည်။
ဤမြို့ကို စွန့်ခွာကြသူတွေထက် ကျွန်ုပ်သည် ပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့် နေထိုင်သူ၊ သာ၍ချမ်းသာ သူနှင့် ပို၍အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်သူအဖြစ် ဤမြို့၌ တစ်ဦးတည်း ကျန်ရစ်သောသူ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ တစ်နေရာတည်း၌ အခြေချနေထိုင်ဖို့ ကျွန်ုပ်အားပေးတိုက်တွန်းပါတယ်။ ရွှေ့လျားသွားလာသူများကို ဆန့်ကျင်ပါ။ အမြစ်ချလျှက် သင်ရှိရာအရပ်၌ တည်မြဲစွာနေထိုင်ပါ။
ထိုထက်မက လောကအရာများ တပ်မက်လိုချင်မှုသည် သင့်ကိုသင် ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရန် ခက်ခဲစေသည်။ “အများသောသူတို့သည် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ကူးလူးပြေးလွှားပြီး အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများလည်း တိုးပွားကြလိမ့်မည်” သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူသည်ကား “ပကတိကြင်နာစုံမက်ခြင်းနှင့်ကင်းသောသူ၊ ရန်ငြိုးဖွဲ့သောသူ၊ ချောစားတတ်သောသူ၊ ကိုယ်ဣန္ဒြေ ကို မချုပ်တည်းနိုင်သောသူ၊ ပြင်းထန်သောသူ၊ သူတော်ကောင်းကို မုန်းသောသူ (၂တိ ၃း၃) ဟု ဖော်ပြပါသည်။ “ငညခသညအငညနညအ” စကားလုံးသည် မိမိကိုယ်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်သောသူဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အထဲမှာ စပိန်လူမျိုးများကဲ့သို့ လူတွေဟာ ဆက်လက်ပြီး ရွှေ့လျား သွားနေကြသည့် အကြောင်းရင်းမှာ သူတို့ကိုသူတို့ မထိန်းချုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်၏။ သူတို့တွေ ဟာ ကောင်းမွန်စွာနှင့် တစ်နေရာတည်း၌ အခြေချ မနေထိုင်တတ်ပါ။ သူတို့တွေဟာ ၃ လ တစ်ခါ ၄ လ တစ်ခါ စသဖြင့် ပြောင်းရွှ့နေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ အသက်ရှင်နေထိုင်ရန် မဟုတ်ပါ။
ကံမကောင်းအကြောင်းမလှ ကျွန်ုပ်၏အဖိုး၊ ကျွန်ုပ်အမေ၏အဖေပေါ့ အဖက်ဖက်မှ တောက်တောက်ပြောင်မြောက်သော်လည်း တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ပြေးလွှားရွှေ့လျားနေသူ ဖြစ်၏။ သူ၌ သားသမီး ၇ ယောက်ထွန်းကားခဲ့သည်။ တစ်ယောက်တစ်ခြားစီ မွေးဖွားကြသည်။ မရပ်မနား ရွှေ့လျားပြေးလွှား နေရ၏။ ကျွန်ုပ်၏အမေသည် ဥက္ကလာဟိုမားမြို့၌ မွေးဖွားသူဖြစ် ၏။ ကျွန်ုပ်၏ အစ်ကိုယ်ကျတော့ နာဗာဒမြို့၌ မွေးဖွားသူဖြစ်သည်။ သူတို့အထဲက နှစ်ယောက် သည် အနောက်ကနေဒါတွင် မွေးဖွားခဲ့ကြသည်။ ရွှေ့လျားပြေးလွှား ပြေးနေရကြ၏။ အဆုံး၌ တာနေရာမှတစ်နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေသဖြင့် အဖေ၌ဘာမှလည်း မကျန်တော့တာ အံ့ဩစရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့ နေထိုင်ရန်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်မိဘတွေရဲ့ ရွှေ့လျားပြောင်းရွှေ့နေသော ဘ၀အသက်တာကို လေ့လာမိတဲ့အခါ ကျွန်ုပ်၏သားသမီးတွေကို ကျွန်တော် ယခုကဲ့သို့ ပြောင်းလဲ အသက်ရှင်နေစေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်အတူ အိပ်ရာမဝင်ခင်လေး ကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းပေါင်းကို ရေတွက်မိခဲ့တယ်။ အထက်တန်းကျောင်းမပြီးခင် ကျောင်းပေါင်း ၂၈ ကျောင်း ပြောင်းရွှေ့ ကျောင်းတက်ဖြစ်တာကို တွေ့ရတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ အိမ်မြောက်များစွာ၌ လည်း ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာရင် တစ်နေရာတည်း၌ အခြေချ နေထိုင်သွားမယ်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရွှေ့ပြောင်း၊ ရွေ့လျားနေ သောသူတို့ အဆင်ပြေနေထိုင်သည်ကို မတွေ့မြင်၍ ဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ ဤနေရာသို့ ပြောင်းရွှ့ လာပါက ဤနေရာ၌ နောက်ဆုံးအဖြစ် အခြေချနေထိုင်လိုက်ပါ။ ဤသည် ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံး အနေဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု” ခြေအစုံကို ချ၍ မိမိကိုယ်ကို ပြောပါ။
အော်လ်ဒေါစ်ဟက်ကလေးသည် ဗြိတိန်အသင်းအဖွဲ့ကို ဒေါက်ဘလင်း၊ အီရီလန်၌ တွေ့ဆုံဖို့ သွားခဲ့၏။ သို့ပါသော်လည်း နောက်ကျပြီးမှ ဘူတာရုံကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လျှင်မြန်စွာဖြင့် မြင်းလှည်းရှိရာသို့ ခုန်ပြေး၏။ မြင်းကို မြန်မြန်နှင်ပေးပါ” ဟု မြင်းလှည်းသမား ကို ပြော၏။ ဒီလိုနှင့် မြင်းလည်း တစ်ဟုန်ထိုးလမ်းပေါ်၌ ပြေးတော့၏။ မကြာမှီမှာပင် ဟက်ကလေးက မြင်းလှည်းသမားအား “ဘယ်ကိုဦးတည်သွားနေသလဲဆိုတာ သင်သိသလား?” ဟု မေး၏။ မြင်းလှည်းသမားက ဘယ်ကိုဦးတည်သွားနေသလဲဆိုတော့ မသိပေမယ့် မြင်းလှည်း တော့ မြန်မြန်မောင်းနေတယ်ဟု ပြော၏။ “ယနေ့ခေတ်လူတွေလည်း ထိုကဲ့သို့ဖြစ်တယ်။ “ကျွန်ုပ်ဘယ်ကို သွားနေသလဲဆိုတာ မသိပါ။ သို့ပေမယ့် မြန်မြန်တော့ ရွှေ့လျားနေကြသည်” ကျွန်ုပ်တို့ဘာကို ဆိုသလဲဆိုတာ၊ မသည်းကွဲဘူး။ သို့ပေမယ့် “ဆိုးဆိုးဝါးဝါးနှင့် လျှင်လျှင် မြန်မြန်” ဖြစ်စေလိုတယ်ဟု ခုတ်တပ်မတော်သားများ ဝါရှင်တန်သို့ ချီတက်ပြီး သူတို့၏ လုပ်ငန်းရှင်းလင်းပြောပြသည်။ ထိုကဲ့သို့ ယနေ့လူငယ်များ ဘာမှန်းမသိဘဲ အလျင်စလို ရွှေ့လျားနေကြ၏။ “ကျွန်ုပ်ဘာကို လိုသလဲဆိုတာ မသိရဘူး။ သို့ပေမယ့် လိုသောအရာ မြန်မြန်ရလို၏” ဟု ဆိုကြ၏။ စကားမစပ်၊ ပြောရအုံးမည်။ သင်၏အသက်တာ ဘယ်ကို dဦးတည်ချီတက်နေသလဲ?။ လျင်လျင်မြန်မြန်နှင့် သွားတော့သွားနေ၏။ သို့ပေမယ့် “သင်ဘယ် ကို သွားနေသလဲ?။ သင်ဟာ လျှင်မြန်နေတဲ့ သင့်အသက်တာ လမ်းကြောင်း၌ အသက်ရှင်နေ တယ်။ သို့ပေယမ့် သင့်အသက်တာက သင့်ကို ဘယ်နေရာသို့ ပို့ဆောင်နေသလဲ?။ ကနေ့မှစ၍ အသက် ၂၅ နှစ်တိုင် ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ?။ ကနေ့မှစ၍ အသက် ၁၅ နှစ်တိုင် ဘယ်ကိုသွားနေမှာ လဲ? သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန် သွားနေတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ သို့သော် ဘယ်ကိုသွားနေတာလဲ? ကနေ့မှစ၍ အသက် ၁၀၀ ထိတိုင် ဘယ်ကိုဦးလှည့်သွားနေမှာလဲ? သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေး သွားနေပြီ။ သို့ပေမယ့် ဘယ်နေရာကို သင်သွားနေတာလဲ? ဘ၀အသက်တာ၌ သင်လိုအပ်သော အရာကား အဘယ်အရာနည်း? အတွေးအခေါ်သမားတွေရဲ့ ဘ၀အသက်တာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးခွန်းတွေ သင်သိမှာပါ။ ကျွန်ုပ်က ဘယ်သူလဲ?တဲ့ ဘာကြောင့် ဤနေရာကို ရောက်နေသလဲ? ဘယ်ကို အကျွန်ုပ်သွားမှာလဲ?။ စသော မေးခွန်းတွေပါ။ သင်၌ ထိုမေးခွန်းရဲ့ အဖြေ သင်၌မသိရှိဘူးဆိုလျှင် သင်ဟာ ကောလိပ် တက္ကသိုလ်ကျောင်း ဘွဲ့ဘယ်လောက်ပဲရရပေါ့ ဗျာ။ သင့်ကို အထင်သေးစရာ ကောင်းနေပြီ။ ထိုအမေးနှင့် ပါတ်သက်၍ မိတ်ဆွေကောင်းမှု ကုသိုလ်တွေနှင့် မဆိုင်ပါဘူး။ မိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက် မဟုတ်ဘူး။ သင့်သည် အဘယ်သူ နည်း?။ ဘာကြောင့် နေရာ၌ ရှိနေသလဲ?။ ဘယ်နေရာကို သင်သွားမှာလဲ?။ ဘယ်နေရာ၌ သင်အသက်တာကို ထာ၀ရ အချိန်ကုန်စေမှာလဲ?။
လူတစ်ဦးကို တစ်ရံတစ်ခါတုန်းက ကျွန်ုပ်ကပြောပြပြီးပြီ။ ထိုအမျိုးသမီးက “ဤအသင်း တော်သို့ ကျွန်မ မရောက်ခင် ဘာလို့ဤနေရာ၌ ကျွန်မ အသက်ရှင်ရတာလဲ? ဆိုတာ မသိခဲ့ဘူး။ သူမဆက်ပြောသည်မှာ အလုပ်ကိုသွားတယ်။ ပြန်လာတယ်။ ညအိပ်ရာဝင်တယ်။ မနက်၌ အိပ်ရာမှ နိုးထတယ်။ အလုပ်ကို ပြန်သွားတယ်။ အိမ်ကိုပြန်လာတယ်။ ညအိပ်ရာဝင် တယ်။ မနက်ကျ အိပ်ရာမှထတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မကို ကျွန်မ မေးဖြစ်တယ် “အသက်ရှင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမေးမိတယ်။ ဘာကြောင့် ဤနေရာ၌ ရောက်ရှိနေတာလဲ? ဘယ်ကို ကျွန်မ သွားနေလဲ? ဆက်ပြီး သူမပြောသည်မှာ ဘာကြောင့် ဤကမ္ဘာ၌ ကျွန်မရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာနှင့် အသက်တာ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဤအသင်းတော်ရောက်မှပဲ သိရတာဖြစ်တယ်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ထိုအရာသည် မိတ်ဆွေ သိဖို့ လိုပေ၏။ ဘာကြောင့် တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ဆန်ပြီး မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေရမှာလဲ? အသင်းတော်ရှိရာသို့ ကြွရောက်လာပါ!
ရင့်ကျက်သော ခရစ်ယာန်လူကြီးတစ်ဦးနှင့် လူငယ်တစ်ဦနှင့်အတူ ထိုင်ဖြစ်၏။ ဤလူကြီး တော့ နေရာအနှံ့သွားပြီး အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သူဖြစ်မည်ဟု တွေး၏။ သူဟာ ငွေကြေးများစွာ ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်၏။ ထိုလူကြီးက လူငယ်အား “သင့်အသက်တာ၌ သင်ဘာကို လုပ်ဖို့ရည်ရွယ် သလဲ? ဟုမေး၏။ “အလုပ်အရမ်းကြိုးစားရမည်ဟု” လူငယ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုလူကြီးက ငိုက်စိုက်ကြည့်၍ ပြန်ပြောသည်မှာ အဲဒီနောက် ဘာလုပ်မှာလဲ? ငွေကြေးများစွာ စုဆောင်းမည် ဟု ပြန်ပြော၏။ ထိုလူကြီးက ပြန်လည်၍ အဲဒီနောက် ဘာလုပ်မလဲဟု ထပ်မေးပြန်တယ်။ ကျွန်တော်လက်ထပ်ရလိမ့်မည်ဟု ပြော၏။ ထိုလူကြီး အဲဒီနောက် ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ?ဟု ထပ်မေး၏။ ထိုလူက ကျွန်တော့်မိသားစုရှိလာပြီး ထိုမိသားစုကို ကျွေးမွေးရလိမ့်မည်ဟု ဖြေ၏။ နောက်ပြီး ဘာလုပ်မှာလဲဟု မေးပြန်၏။ ကျွန်တော် အေးဆေးအနားယူပြီး စုဆောင်း ထားသောငွေကြေးအားဖြင့် ဇိမ်ရှိရှိဘ၀ကို အချိန်ကုန်စေမည်ဟု ဖြေ၏။ ထိုလူကြီးက “နောက်ထပ် ဘာလုပ်အုံးမလဲဟု မေးလေ၏။ ကျွန်တော် “တစ်နေ့သေရလိမ့်မည်ဟု ဖြေဆို၏။ နောက်ထပ် ဘာဖြစ်မှာလဲဟု ပြန်မေး၏။ ထိုမေးခွန်းက ထိုလူငယ်အား ထိတ်လန့်စေသည်။ ပြီးတော့ ထိုကဲ့သို့ မေးခွန်း၏အဖြေကို ဘယ်တော့မှ တွေးမထားခဲ့ပေ။
ထိုအရာ သင်သိရှိလုပ်ဆောင်ရမှာပါ။ “ကျွန်ုပ် အသက်တာ၌ စစ်မှန်သော အဓိပ္ပာယ် က ဘယ်အရာလဲ” ဟု သင့်ကိုသင် မေးရပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အသက်တာ ဘယ်ကို သွားမှာလဲ? ကျွန်ုပ်သည် တစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ ရွှေ့လျားနေတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ အကယ် စင်စစ် ဘယ်နေရာကို အကျွန်ုပ်သွားနေသလဲ” ဆိုတာ သိရပါလိမ့်မည်။ ထိုအရာများအတွက် သင့်ကို ဤဘုရားကျောင်းသို့ နောက်အပတ် တနင်္ဂနွေဝတ်ပြုခြင်း၊ အစီစဉ်သို့ ပြန်လာစေချင် တာဖြစ်တယ်။ အသင်းတော်၌ ခိုင်ခံ့သော မိတ်သင်၌ရှိနေစေချင်တယ်။ ဤနည်းလမ်းအားဖြင့်သာ သင်၏အထီးကျန်ခြင်းကို ကုစားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ အသင်းတော်ဟာ ပြည့်စုံသော နေရာတော့ မဟုတ်ဘူး။ လူဆိုသည်မှာ ပြည့်စုံသူမဟုတ်ပါ။ ထိုလူသားများ စုဝေးသောနေရာဖြစ်သော ကြောင့်ပါ။ သို့သော်လည်း “ဤလောက၌ ဝမ်းမြောက်စရာ ပြည့်စုံသောနေရာဟာ အသင်းတော် ၌သာဖြစ်တယ်ဟု သူတို့ဒစ်စနေကန်အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောပြသည်။ သို့ပေမယ့် သူတို့အဆိုမှားပါတယ်။ “အကယ်တော့ ဒေသန္တရအသင်းတော်၌သာ ဝမ်းမြောကခြင်း စုံလင်တဲ့နေရာပါ
သင်သည် သင့်အသက်တာကို ဒေသန္တရအသင်းတော်ထဲ၌ ဆက်ကပ်အပ်နှံရပါမည်။ အကယ်၍ တခဏတဖြုတ် ပါဝင်ခြင်းက သင်၏အထီးကျန်နေခြင်းကို ကုစားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည် အသင်းတော်၌ အကျွမ်းတဝင်ရှိနေရပါမည်။ အပတ်တိုင်း ဘုရားကျောင်းလာရပါမည်။ ထိုကဲ့သို့ အသက်တာအပ်နှံခြင်းသည် ခိုင်မြဲသော အကြင်လင်မယားကဲ့သို့ အသင်းတော်မိသားစု ကဲ့သို့ဖြစ်စေပါသည်။ လူအများတို့ အထီးကျန်ရခြင်းသည် လောဘ၊ အတ္တပြင်းထန်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် “အိုးလ်ဧကရူးမ်၏ “ဒိတ်ကန်၌ ခရစ္စမတ်ကယ်ရို’Y’ ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ သူတို့သည် သူတို့၏ လောဘ၊ အတ္တကြောင့် အဆုံး၌ တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန် ကျန်ရစ်ကြ ၏။ အနံ့ဆိုးဖြင့် အိမ်၌နားကြ၏။ အဓိပ္ပာယ်နှင့်ပြည့်စုံသော ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကို ဖြတ်တောက်ကြသည်။ အခုမှစ၍ စတင်ကျင့်သုံးပါ၊ သင့်အသက်အရွယ် ငယ်စဉ်၌ စတင်ပါ။ စတင်၍ ဘ၀အမှန်တရားတစ်ခုကို စိုက်ထူလိုက်ပါ။ တည်မြဲသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၌ သင်စတင် မပေါင်းသင်းဘူးဆိုရင် တစ်ကိုယ်တဲ အထီးကျန်ဆန်နေအုံးမှာပဲ။ ငရဲထက်ပိုသော အထီးကျန်ခြင်းဆိုတာ မရှိတော့ပေ။ ချမ်းသာကြွယ်၀သော သူဌေးကြီးသည် ငရဲ၌ အထီးကျန် ရစ်ပြီး သူတောင်းစားအား လက်ညှိုးဖြင့်ရေကို မိမိလျှာ၌ လာတို့ပေးဖို့ အသနားခံခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ အကယ်၍ မိတ်ဆွေသည် တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်နေခြင်းမှ အောင်မြင်လိုပါက ဤဒေသန္တရ အသင်းတော်၌ ပါဝင်ပြီး အခြေတကျနေထိုင်သွားပါ။
ထို့နောက်သင်သည် ဘုရားသခင် သားတော်ယေရှုခရစ်ထံသို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ရမည်။ ထိုသခင်သည် သင်အပြစ်အဖိုးအခအတွက် လက်ဝါးကားတိုင်တွင် အသေခံပေးဆပ်ပြီးဖြစ်တယ်။ သင့်အပြစ်ကို ဆေးကြောသန့်စင်စေရန် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခဲ့ပြီ ဖြစ်တယ်။ ထိုသခင်သည် သေခြင်းမစ္စုမာန်ကို အောင်မြင်ပြီး ရှင်ပြန်ထမြောက်ကာ ကောင်းကင်ဘုံအဖ ခမည်းတော်၏ လင်္ကျာဘက်၌ စံပယ်တော်မူပြီ ဖြစ်တယ်။ သင့်သည် “မေ့မေ့လျော့လျော့” မေ့နေခြင်းမရှိဘဲ သင့်အသက်တာ အတ္တနေရခြင်းမှ လွှတ်မြောက်ပြီး ဘုရားမဲ့တရားမဲ့ဘ၀မှ လွတ်မြောက်ဖို့ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ဘုရားကျောင်းသို့ ကြွလာပါ။ ထိုအရာသည်သာ စစ်မှန်သော နောင်တတရားပါ။ ထိုသို့ အလို့ငှာ သင့်ကိုအလိုရှိ၏! စစ်မှန်သော ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ထံ တိုးဝင်ချည်းကပ်ပြီး အပြစ်ခွင့်လွှတ်ဖို့ သွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။ ဤသည်ဓမ္မသစ် ကာလ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ ဤသည် ကြီးမားသော အသက်တာဘ၀၌ အမေးခံရ သော မေးခွန်း၏ အဖြေဖြစ်၏။ ဤသည်ထာ၀ရ အသက်ရှင်စေသောနည်းလမ်းဖြစ်၏။ တစ်နေရာ မှ တစ်နေရာသို့ လှည့်လည်သွားနေခြင်းထဲမှ ရုန်းထွက်လာခဲ့ပါ။ ထိုအရာကို ချန်ထားခဲ့ပါ။ ဓမ္မသစ်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်ဟူသော ဒေသန္တရအသင်းတော်သို့ ကြွလှမ်းခဲ့ပါ။ ခရစ်တော်ဘုရား ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပါ။ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပါ။ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပါ။ အစဉ်အမြဲ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီး သွန်းလေးmင်းပါစေ!
ဒေသနာတော်မတိုင်ခင်၊ ဒေါက်တာ ခရိတ်တန်အယ်.ချန်မှ
(ဒံယေလ ၁၂း၁ -၄ç ၈-၁၀ ကို ဖတ်ကြားပေးသည်။
ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာ ဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ
“အရပ်ရပ်သို့သွားလာ လှည့်လည်သော အမျိုးအနွယ်”
“သင်ဒံယေလမူကား အမှုကုန်ရသည့် ကာလတိုင်အောင် ဤစကားတော်တို့ကို ပိတ်၍ စာစောင်ကို တံဆိပ်ခတ်ထားလော့။ အများသောသူတို့သည် ကြည့်ရှုသောအားဖြင့် ပညာတိုးပွားကြ လိမ့်မည်ဟု ပြောဆို၏ (ဒံယေလ ၁၂း၄)။
ဒံယေလ ၁၂ ၈-၉
၁။	ပထမ၊ ဒံယေလ ၁၂း၄နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်သော နောက်ဆုံးသော ကာလ၌ဖြစ်ပျက်လာမည့် လက္ခဏာသက်သေများကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ (ဒံယေလ ၁၂း၄၊ လုကာ ၂၁၁၁၊ ၂၅-၂၆ လုကာ ၂၁း၁၀၊ ဇာခရိ ၁၂း၃၊ လုကာ ၂၁း၁၂၊ ၂ သက် ၂း၃”
၂။	နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ တိုးပွားပြီး ခရီးသွားလာသူများ များပြားလိမ့်မည်ဟု နုတ်ကပတ်တော်၌ ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒံယေလ ၁၂း၄
၃။	တတိယ၊ ကပ်ကမ္ဘာကာလ၏ နောက်ဆုံးနေ့ရက်သည် လူသားတိုင်း မနားမနေ ခရီးသွား လာကြလိမ့်မည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ ဖော်ပြခဲ့သည်။
(ကမ္ဘာ ၄း၁၄၊ ရှင်မဿဲ ၂၄း၃၇၊ ၂ တိ ၃ါ်၁-၂ ရှင်မဿဲ ၆း၃၃၊ ၂တိ ၃း၃